QupZilla: Browser kale oo loogu talagalay GNU / Linux iyo Windows | Laga soo bilaabo Linux
QupZilla: Browser kale oo loogu talagalay GNU / Linux iyo Windows
QupZilla waa biraawsar aad u yar (1.9Mb on .deb) ku qoran Qt, inaad u isticmaasho sidii mootada Qalabka mareegaha waana mid aad u dhakhso badan, kaas oo aan ku ogaaday akhriska barta GSpades.
Isticmaalayaasha KDE Way ku farxi doonaan isticmaalkeeda, maxaa yeelay, ima i khiyaanayn, QupZilla waxay ku saleysan tahay nooc ka mid ah (inyar ooyar) de Firefox iyadoo lagu daro qaar, laakiin lagu qoray Qt. Iskuxirkeeda, ikhtiyaarradeeda iyo habdhaqankeedaba aniga marwalba way igu faqaan.
Laakiin aan u fiirsano waxa ina daneynaya. QupZilla Waxay ka kooban tahay xulashooyin badan oo qaabeyn ah, qaar aad u xiiso badan, sida bedelida muuqaalka. Waan kala beddeli karnaa Chrome, Mac, Windows, oo ah dulucda biraawsarka ama nidaamka dulucda asalka.
QupZilla ku yimaado asal ahaan AdBlock, a Maareeyaha cookie, leeyahay baarid gaar ah, maareeyaha soo dejinta aasaasiga ah, maareeyaha sirta ah, wakiil wakiil oo ay ku jiraan kuwaaga Akhriste RSS:
Waxa kale oo ku jira kuwaaga Wicitaan Degdeg ah taas oo ah mid aad u fudud in la qaabeeyo, oo ka mid ah xulashooyinka biraawsarka, waxaan dooran karnaa inaan yeelano asal hufan.
Sidii aan ii sheegayey, ima khiyaanayso. La mid ah Firefox, isticmaalkeedu wuu dhow yahay 113 Mb waxaana jira daqiiqado marka ay isiiso dareenka ah inuu ku dhegan yahay, in kasta oo aysan aniga igu dhicin. Sidoo kale waa laga yaabaa inaan isticmaalo gtk iyo deegaan Qt sida KDE waxqabadkaagu waa ka macaash badan yahay.
Ayaa loo heli karaa Windows (.exe), waayo, Linux (.deb iyo keydka Arch ee Yaourt) labadaba 32 iyo 64 jajab oo leh mid u gaar ah PPA waayo, Ubuntu.
Sidoo kale hadaan rabno sidoo kale waan kala soo dagsan karnaa GitHub. Iyaga kaliya ayaa u hartay iyaga inay isku dayaan oo ay arkaan sida ay ula socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » QupZilla: Browser kale oo loogu talagalay GNU / Linux iyo Windows
mmmm xiiso leh> soo dejinta 8)
Waxyaabaha foosha xun ayaa ah inay wali xasilloon tahay.
Dhamaan daalacashada qt waa kuwo aan xasilooneyn haddii aad ku booqato degello internet toos ah, tani waxay ugu wacan tahay cayayaanka qwebkit ee aan weli la xallin
Maalinta aan mar kale u isticmaalo KDE, waxay noqon doontaa musharraxa ugu weyn haddii aan xusuusto, maxaa yeelay waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan
INSPIRED by firefox open desir qaali
Browser cunaguaro ma garanayo sababta ay bog u raaceyso boggu inuu madhan yahay oo uusan waxba soo rarin, maxaan sameeyaa ??
Toos u isticmaal Firefox .. taasi waa waxa ay tahay inaad sameyso 😀
Haddii aan mar dambe isku dayi doono ...
Kiniinigii ugu horreeyay ee ku saleysan Linux ayaa dhasha
La heli karo si loo soo dejiyo Firefox 9